बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए कहिल्यै नमर्ने यस्तो जीव, यस्तो छ रहस्य (भिडियो सहित)
अहिले संसारमा जलवायु परिवर्तन र भूमण्डलीय उष्मीकरणको कारणले गर्दा विभिन्न जीवजन्तुहरु लोप भएको र लोप हुन लागेका खबरहरु हामिले धेरै जसो सुन्ने गर्छौं। तर बैज्ञानिकले भने एक जीव सम्बन्धि अनौठो दावी गरेका छन्। ८ वटा खुट्टा भएको एक ‘टार्डीग्रेड’ नामक जीव सुर्य रहुन्जेल बाँच्ने ठुला बैज्ञानिकहरुको दावी छ। त्यसैले बैज्ञानिकहरुले यस जीवलाइ अमर घोषित गरेका छन्। यो जीवको लगभग १० …
१ सय ५२ वर्षपछिकाे दुर्लभ खग्रास चन्द्रग्रहण (LIVE)
अहिले खग्रास चन्द्रग्रहण लागिरहेकाे छ । बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाएकाे र ६ बजेर ३६ मिनेटमा इशान कोणबाट ग्रहणले छुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणको मध्यकाल ७ बजेर १७ मिनेटमा हुनेछ । आठ बजेर ५७ मिनेटमा पश्चिमबाट ग्रहणको मोक्षकाल हुने अर्थात् ग्रहण सकिने समितिका अध्यक्ष प्रा. डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । याे चन्द्रग्रहणमा खग्रास, …
फूलचोकी जाँदा बेपत्ता भएका विद्यार्थी ६ दिनपछि भेटिए
सात दिन पहिले फुल्चोकीमा हाइकिङ (भ्रमणमा) जाँदा हराएका विद्यार्थी जोन तामाङ आज जिवितै फेला परेका छन्। ललितपुरको थसिखेलस्थित अजय शिक्षा सदनमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत तथा कुसुन्ती बस्ने १७ वर्षीय जोन तामाङ बिहीबारदेखि हराएका थिए । तामाङ आज हराएकै स्थान फुलचोकीको सेतो कखरा भन्ने ठाउँको एउटा खाल्डोमा फेला परेका हुन् । तामाङलाई बुधबार साँझ लगभग साढे ५ बजेतिर हिमाल तथा …
रातभरी मोबाईल चार्ज गर्दा कतै ब्याट्री बिग्रिने त होईन भनेर पक्कै पनि तपाईँले कैले न कैले सोचेको वा सुनेको हुनुपर्छ। हामी सबैलाई विहान उठ्ने वित्तिकै मोबाईल फूल चार्ज भको हेर्न मन लाग्छ तर रातभरी मोबाईल चार्ज गर्दा ब्याट्रीको आयु घट्ने डरले कतिपयले मन भई भई पनि राती चार्ज गर्दैनम्। गरेपनि ब्याट्री ओभरचार्ज हुने डरले राती आदा निन्द्रोमा चार्जर डिस्कनेक्ट गर्छम्। …
चीनको स्मार्टफोन बजारमा घरेलु कम्पनी ओप्पोले पहिलो स्थान ओगटेको छ । सन् २०१७ मा बढी बिक्री भएका १० मोबाइलको सूचीमा ९ वटा घरेलु ब्रान्ड छन् ।दोस्रो स्थानमा रहेको एप्पल टप टेनमा पर्ने एक मात्र विदेशी कम्पनी हो । आइफोन ७ प्लसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन बजारमा २.८ प्रतिशत बजार हिस्साओगटेको काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चले जनाएको छ । एप्पलको ठूलो स्क्रिनवाला फोनले ओप्पो …
झापामा घुमुवा तथा सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीको ज्यादती हामीले यस अघिका कार्यक्रमहरुमा देखाईसकेका छौं । फेरि सादा पोसाकमा खटिएका कर्मचारीको अर्को ज्यादती सार्वजनिक भएको छ ।इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडबाट सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी जवानद्वय सुजन श्रेष्ठ र श्यामदेब यादवले बिर्तामोड–४ का एक बालकलाई निर्घात कुटेका छन् । गत बिहीबार राती प्रहरीबाट निर्घात कुटिएका १४ बर्षिय बालक सन्दिप प्रसाईं अहिले अस्पतालको …
आर्मी अफिसर्स क्लबमा भएको कामना अवार्डको आकर्षण, कुन चलचित्र पर्यो उत्कृष्टमा र को बने उत्कृष्ट नायक–नायिका
आर्मी अफिसर्स क्लबको भरिभराउ सभा मण्डपको मञ्च अकस्मात् अँध्यारोमा परिणत हुन्छ। जब प्रकाश छाउँछ, स्वरसम्राट नारायण गोपालको स्वर्णिम सन्ध्याको झल्को दिँदै गायक रामकृष्ण ढकाल गुञ्जन्छन् स्वरसम्राटकै रूप र स्वरमा। नारायण गोपालले स्वर्णिम सन्ध्यामा गाएको तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि बाट शुरू भएको उनको गायन प्रस्तुति फिल्मी युगल गीतबाट अन्त्य हुन्छ गायिका जुना प्रसाईंको साथमा। श्रद्धासुमनको भिन्न रूपबाट शुरू भएको लक्स …
देख्दा दुरुस्तै देख्दैमा त्यस सामानको गुणस्तर एउटै नहुन सक्छ । हामी मोवाइल चलाउन त जान्दछौ तर हामीहरुलाई आफूले बोकेको मोबाइल सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छुट्याउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ ।मोबाइल किन्ने बेलामा त मोबाइल पसलेले नक्कली हो भन्ने कुरा आउँदैन उसले सबैजसो मोबाइललाई सक्कली नै भनिरहेको हुन्छ । यदी हामी त्यस कुरामा अनविज्ञ भएमा हामी सहजै ठगिन सक्छौ ।त्यसकारण मोबाइल …
पद्मावत रिलिज भएपछि महानायक अभिताभले रणवीरलाई दिए यस्तो उपहार !
रणवीर, दीपिका र शाहिदको चलचित्र ‘पद्मावत’ ले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । चलचित्रको निकै बयान भईरहेको छ । साथै रणवीर सिंह पनि अलाउद्दीन खिलजीको रोलमा छाएका छन् । रणवीर सिंहलाई उनको भूमिका र अभिनयले तारिफ प्राप्त भईरहेको छ । रणवीरको यस अभिनयमा बिग बी पनि आश्चर्यमा परेका छन् । महानायक अमिताभ बच्चनले रणवीरको यस्तो अभिनयको लागि उपहार समेत …
कस्तो अचम्मको यो कमालको बिरालो, आफैले लिन्छ जबरजस्त सेल्फी
यी दिनहरुमा एक बिरालोको सेल्फी सोसल मिडियामा भाइरल भईरहेको छ। उक्त बिरालो सेल्फी खिच्न यति माहिर छ कि मानिसहरु उसलाई सेल्फी क्याट नामले बोलाउने गर्दछन। >हास्यास्पद कुरा भनेको यो बिरालोले केबल आफ्नो मात्र होईन, आफ्नो साथीहरुसँग पनि सामूहिक सेल्फी खिच्ने गर्दछ। तपाईले यो कुरा तस्वीरलाई हेर्दा नै बुझ्नुहुनेछ। यो बिरालोले कहिले जिब्रो बाहिर निकालेर पोज दिन्छ, त कहिले चिसो मौसममा …
किन बन्यो यो सामान्य तस्विर संसारभर भाइरल ? आखिर के थियो यसमा !
अहिलेको सूचना र सञ्चार तथा इन्टरनेट दुनियाँमा सामान्य मान्छे पनि एकै छिनमा स्टार बन्न सक्छ। एउटा सामान्य तस्बिर पनि छिन भरमै विश्वभर भाईरल बन्न सक्छ। अहिले एउटा सामान्य तस्बिर पछिल्लो केही समय पहिला इन्टरनेटमा भाइरल बनेर जताततै छाईरहेको थियो । झट्ट हेर्दा निकै सामान्य लाग्ने यो तस्विर चर्चामा आउनका विशेष कारण रहेको छ फोटो कसले र कहाँ खिच्यो भन्ने बारे …
यो तस्बिरमा छ एउटा यस्तो ठूलो गल्ति ? के तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ?
कुनै यस्ता चिजहरु जसले हाम्रो आँखालाई धोका दिन्छन्। हामीले एउटा कुरा देख्छौं, तर त्यो वास्तवमा एर्कै कुरा हुन जान्छ। यससँग जोडिएको एउटा पनि छ। यदि तपाईले आफुलाई पजल मास्टर (भूल भुलैया बिज्ञ)सम्झनु हुन्छ भने चलाउनुस आफ्नो दिमाग, र पत्ता लाउनुस यसको उत्तर… यस तस्‍वीरमा लुकेको छ एक गल्ती भानिन्छ, दिमाग जती सक्रिय रहन्छ उत्तिकै तेज पनि गर्छ। त्यसैले दिकागलाई हर …
Page 12 of 427« First...1011121314»203040...Last »